फुटबल Archives - TV Annapurna
स्ट्राइकर एलेक्स सान्चेजलाई १६ महिनाको जेल सजाय
February 8, 2018 Annapurna TV
२५ माघ, काठमाडौं । फुटबलर एलेक्स सान्चेजलाई स्पेनको एक अदालतले एक वर्ष ६ महिनाको जेल सजायँ तोकेको छ । कर छलीको आरोपमा उनलाई यो सजाय दिइएको हो । तर उनलाई जेलमा भने बस्नु पर्ने छैन । किनकी स्पेनको कानुनअनुसार दुई वर्षभन्दा कम सजायँमा जेल बस्नु पर्दैन । स्ट्राइकर सान्चेज गत जनवरीमा आर्सनलबाट म्यानचेस्टर युनाइटेडमा गएका थिए । सान्चेजले सन् २०१२ देखि २०१३ सम्म बार्सिलोनाबाट खेलेका थिए । त्यही बेला उनले ९ लाख पाउण्ड कर छलेको दावीसहित मुद्दा परेको थियो । उनी धेरै कमाउने खेलाडीहरुमध्येमा पर्दछन् । उनको आम्दानी हप्ताको ६…
फुटबलLeaveacomment
फिफा वरियतामा नेपाल ६ स्थान माथि
January 18, 2018 January 18, 2018 Annapurna TV
फिफा वरियतामा नेपाल ६ स्थान माथि उक्लिएको छ । विश्व फुटबलको सर्वाेच्च निकाय फिफाले बिहिबार जारी गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालले ६ स्थान सुधार गर्दै १ सय ६५ औं स्थानमा उक्लिएको हो । अघिल्लो महिना नेपाल १ सय ७१ औं स्थानमा रहेको थियो । दक्षिण एसियामा भने नेपाल चौथो स्थानमा यथावत छ । दक्षिण एसियामा भारत, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स शीर्ष तीनमा रहेका छन् । भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान क्रमश पाँचौं देखि आठौं स्थानसम्म छन् । छिमेकी मुलुक भारत तीन स्थान सुधार गर्दै १ सय २ औं स्थानमा पुगेको छ ।…
खेलकुद, फुटबलLeaveacomment
ला लिगाः बार्सिलोना उपाधिको नजिक, संकटमा रियल मड्रिड
January 16, 2018 January 16, 2018 Annapurna TV
काठमाडौं । ला लिगा आधा बाटोमा आइपुगेको छ र पहिलो राउन्डमा सशक्त प्रदर्शनपछि बार्सिलोनाले उपाधि आफ्नो पोल्टोमा पार्ने लगभग तय भएको छ । रियल मड्रिडविरुद्ध स्पेनिस सुपर कपमा फितलो प्रदर्शन गरेको पाँच महिनामै क्लबले यो ‘चमत्कार’ गर्ला भन्ने कमैलाई विश्वास थियो । यस क्रममा एर्नेस्टो भाल्भर्डेको टोली १९ वटा म्याच खेल्दासम्म अपराजित रहेको छ । उसले अहिलेसम्म १६ जित र ३ बराबरी खेलेर ५१ अंक जोडेको छ । बार्सिलोना अहिले दोस्रो स्थानमा रहेको टिमभन्दा ९ अंकले, तेस्रो स्थानको भन्दा ११ अंकले र चौंथो स्थानको टिमभन्दा १९ अंकले अगाडि रहेको…
त्रिभुवन आर्मी क्लबले जित्यो खप्तड गोल्डकपको उपाधि
January 15, 2018 January 15, 2018 Annapurna TV
धनगढी। सुदूरपश्चिमको धनगढीमा जारी खप्तड गोल्डकपको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ । सोमबार फाइनल खेलमा अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई टाइब्रेकरमा ५-४ ले पराजित गर्दै आर्मी उपाधि जित्न सफल भएको हो । टाइब्रेकरमा एपीएफका सुदिप शिख्राकारको दोस्रो प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किंदा आर्मी भाग्यमानी भयो । टाइब्रेकरमा आर्मीका लागि नवयुग श्रेष्ठ, सन्तोष तामाङ, दीप लामा, दीपक गुरुङ र विवेक बस्नेतले गोल गरेका थिए । एपीएफका अन्जन विष्ट, नविन लामा, पाल्साङ लामा र रन्जन विष्टले गोल गरे । निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकर बाट लिनुपरेको थियो । यो…
यो वर्षको अहिले सम्मको सफल टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब
January 11, 2018 Annapurna TV
नेपाल आइस सुदूरपश्चिम खप्तडमा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । रुस्लान थ्री स्टार क्लबलाई २-१ ले आर्मी अन्तिम चारमा पुगेको हो । आर्मीले यो वर्ष तीन वटा नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितिसकेको छ । खेलको छैटौं मिनेटमा आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए भने दोस्रो हाफको ४९ औं मिनेटमा सुमन अर्यालले टोलीको अग्रता दोब्बर पारे । निराजन खड्काले ५३ औं मिनेटमा थ्री स्टारका लागि गोल गर्दै खेलमा फर्किने आशा देखाए पनि अन्य गोल हुन नसक्दा थ्री स्टार प्रतियोगिताबाट बाहिरिन पुग्यो । अर्को तर्फ थ्री स्टार भने अखिल…
न्यायाधीशका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कानुन निर्माण हुँदै
पछाडी बस्नेले हेल्मेट लगाए हेड इन्जुरी ८० प्रतिशत कम हुने
तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई दण्डित गरिने : लालबाबु
नेपालीको मोवाईल खर्च ५३ अर्बभन्दा बढी
फेसबुकको शेयरमा आयोे भारी गिरावट
स्पष्ट कानुन नहुँदा बिदामा चलाइएका सरकारी गाडीलाई कारबाही भएन
मेयरविरुद्ध उपमेयरको आमरण अनशन
सतर्कता केन्द्र प्रभाव शुन्य प्राय हुँदै
बर्षौदेखि बन्द विमानस्थलमा बढ्यो चहलपहल, बलेवामा सोमबार परीक्षण उडान
राजु सुवेदी, टिभी अन्नपूर्ण , काठमाण्डौ । सरकारले बन्द विमानस्थल सञ्चालनका लागि सक्रियता देखाएपछि लामो समयदेखी बन्द...
प्रदेश-२ लाई अँध्यारो उपहार: दुई लाख बालबालिका मौलिक हकबाट वञ्चित
प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा स्कूल जाने उमेरका दुई लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । संविधानले ‘अनिवार्य’...
दुर्घटना अघि एयर ट्राफिक र पाइलटबीच यस्तो कुराकानी भएको थियो (सुन्नुहोस् अडियोसहित)
सोमवार काठमाडौंमा दुर्घटनामा परेको बंगलादेशी विमानलाई चालकले दक्षिण्तीरबाट अवतरण गराउनु पर्नेमा उत्तरतिरबाट अवतरण गराएका थिए ।...
ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट डर
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ओलीको उचाई पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । उनका...
विमान दुर्घटनामा ओलीको दोष कति ?
नेपालमा विमानको प्रयोग २००६ सालबाट सुरु भएको हो । पछिल्लो समय नेपाल तथा अन्य देशहरुमा भएका...
सर्वोच्च अदालत प्रयोगशाला नबनोस
विजय ज्ञवाली यतिखेर समग्र लोक गोपालमय भएको छ। विहान विहानको अलिकति चिसो मौसमसंगैको चियापसल देखि लिएर...
यसरी ध्यान गर्दा खुसी बढ्छ
मानिस केले खुसी हुन्छ ? खुसीका मापन अनि सीमा के–के हुन् ? लामो समयदेखि यी दार्शनिक जिज्ञासामाथि बहस अनि घोत्ल्याइँ जारी छ। पछिल्लो समय विज्ञानले खुसीका आयामबारे अनुसन्धान व्यापक बनाउँदै लगेको छ अमेरिकी न्युरोवैज्ञानिक डा। रिचर्ड डेभिड्सनले ध्यानको माध्यमबाट मस्तिष्क (ब्रेन) लाई तालिम दिएर मानिसमा खुसी सञ्चार गर्न...
हरियो खुसार्नी र धनीँयालाई एक महिनासम्म पनि हरियो राख्ने यो हो तरिका
धनीँया, हरियो खुसार्नी जस्ता भान्सामा नियमित प्रयोग हुने तर अति कम मात्रा प्रयोग हुने वस्तु हुन्...
यस्तो छ किशोर किशोरीको यौन जीवन
सूचना प्रविधिको तिव्रतर विकाश, समाज तथा संस्कारमा आएको परिवर्तन सँगै पछिल्लो समयमा जिवनशैली समेत बदलिएको छ...
मृत्यु हुनुभन्दा पहिले हाम्रो दिमागमा कस्ता कुरा आउँछन् ? अध्ययन यस्तो भन्छ
मृत्यु कसैको वशमा छैन । हरेक प्राणीहरु नचाहेरै जन्मन्छन् र अन्त्यमा नचाहेरै मर्छन् । मृत्युका बारेमा...